Fardoowsa Ibraahim: "Dhaqtaradda waxeey igu tiri qimaarka iska dhig!"
Sunday October 02, 2016 - 21:44:01 in Wararka by Xarunta Dhexe
Fardoowsa Ibraahim, waa gabar 23 jir ah oo xanuun haya awgiis u tagay rugta caafimaadka Capio ee xaafadda Mölndal, si loo siiyo xanuun baa'biye ayuu dhaqtarada ku tiri "iska dhig qimaarka!".
Wargeyska la yiraahdo Aftonbladet oo maanta warbixin qoray ayaa sheegay in Fardoowsa oo tagtay rug caafimaad oo ku taala Mönldal, in loo qoro xanuun baa’biye ayaa la kulantay diidmo iyo in lugu amro in iska siibto xijaabka u xiran.”Waxeey igu tiri dhammaan dumarka muslimiinta ah weey iska dhigaan xijaabka marka ay halkaan yimaadaan” Sidaas waxaa u sheegtay wargeyska Fardoowsa oo ka careeysan falkii dhaqtaradda kula dhaqantay ee la xirriira xijaabkeeda.
Fardoowsa waxaa ay sheegtay in ay ka mid tahay dadyowga siiya lacagta oo aysan xaq u laheyn ineey kula dhaqanto xushmad la’aan. Waxeey sidoo kale sheegtay in eey dacwo ugu tagay madaxa xarrunta oo qudhiisa sheegay in habkii loola dhaqmay aanu aheyn mid quruxsan. Hase ahatee dhaqtraraddii markale u ugu timid dood iyo buuq intii ay la hadleeysa madaxa, balse isha ka fiirsanayey oo kaliya buuqa meesha ka dhacaya. Ugu dambeyntiina waxaa ay sheegtay in ay ka soo dhaqaaqday rugtii caafimaad kana war qabin in dhaqtaradu u qortay daawo iyo in kale.
Dhinaca kale Stefan Bremberg, oo ah madaxa xarruntaasi caafimaadka Capio närsjukvård, ayaa isagoo wargeyska u waramaya sheegay in dhaqatarada falkaas geeysatay ay xaaladeedu wanagsaneyn islamarkaasina diiday in ay la hadasho isaga ka madax ahaan. Beremberg wuxuu tilmaamay in uu la xirriirayo Fardoowsa, siddii hadal qabyo ka ahaa loo sii amba qaadi lahaa. Ugu dambeyntiina wuxuu carabka ku dhiftay in uu ka xun yahay falkii dhacay baaritaana ay ku sameeynayaan sida ay wax u dhaceen. Fardoowsa oo carro iyo xanaaq ka muuqdana waxaa ay hadalkeeda ku soo koobtay in dhaqtaradu xaq u laheyn ineey sidaas kula dhaqanto bukaanka u yimaada islamarkaasina sharciga ay u qawaaniinta bukaan socodka u dagsan ay dhaqtarada qudheeda hareer- martay.